Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Ezekiel 33
Nepali New Revised Version, Ezekiel 33
2 “हे मानिसको छोरो, आफ्‍ना देशवासीहरूसँग कुरा गर्‌, र भन्‌: ‘जब एउटा देशको विरुद्धमा म एउटा तरवार चलाउँछु, र त्‍यस देशका मानिसहरूले आफूमध्‍येको कुनै एक जनालाई पहरादार छान्‍छन्‌,
3 र त्‍यसले त्‍यस देशको विरुद्धमा तरवार आइरहेको देखेर तुरही बजाउँछ,
4 तब कसैले त्‍यो चेताउनीलाई सुनेर पनि ध्‍यान दिँदैन र तरवार आएर त्‍यसको ज्‍यान लियो भने त्‍यसका रगतको त्‍यो आफै जिम्‍मेवारी हुनेछ।
5 त्‍यसले तुरहीको आवाज सुनेर पनि चेताउनीको वास्‍ता नगरेको कारणले, त्‍यसको रगत त्‍यसकै शिरमा पर्नेछ। यदि त्‍यसले त्‍यो चेताउनी मानेको भए त्‍यो बाँच्‍नेथियो।
6 तर यदि तरवार आइरहेको देखेर पनि त्‍यस पहरादारले मानिसहरूलाई चेताउनी दिनलाई तुरही बजाएन, र तरवार आएर कुनै एक जनाको ज्‍यान लियो भने, त्‍यो मानिसचाहिँ आफ्‍नै पापको कारण लगिनेछ, तर म त्‍यस पहरादारलाई नै त्‍यसका रगतको जवाफदेही तुल्‍याउनेछु’।
7 “हे मानिसको छोरो, मैले तँलाई इस्राएलका घरानाको पहरादार तुल्‍याएको छु। यसैले मैले भनेको कुरा सुन्‌, र तिनीहरूलाई मबाट चेताउनी दे।
8 जब म दुष्‍ट मानिसलाई भन्‍छु, ‘ए दुष्‍ट मानिस, तँ निश्‍चय नै मर्नेछस्‌,’ र यदि तैंले त्‍यसलाई आफ्‍नो चाल त्‍यागोस्‌ भनेर चेताउनी दिएनस्‌ भने’ त्‍यो दुष्‍ट मानिस आफ्‍नो पापको कारण मर्नेछ, र म तँलाई त्‍यसका रगतको जवाफदेही तुल्‍याउनेछु।
9 तर यदि त्‍यसले आफ्‍नो चाल त्‍यागोस्‌ भनेर तैंले त्‍यस दुष्‍ट मानिसलाई चेताउनी दिइस्‌ र त्‍यसले आफ्‍नो चाल त्‍यागेन भने, त्‍यो आफ्‍नो पापको कारण मर्नेछ, तर तैंले आफूलाई बचाउनेछस्‌।
10 “हे मानिसको छोरो, इस्राएलका घरानालाई भन्‌, ‘तिमीहरू यसो भनिरहेछौ: “हाम्रा पाप र अपराधले हामी थिचिएका छौं, र तिनको कारण हामी निर्बल हुँदैजादैछौं। हामी कसरी बाँच्‍ने त’?”
11 यसैले तिनीहरूलाई भन्‌, ‘जस्‍तो म जीवित छु, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ, दुष्‍टहरूको मृत्‍युमा म खुशी हुन्‍नँ, तर तिनीहरूले आफ्‍नो चाल त्‍यागेर बाँचून्‌ भनी म चाहन्‍छु। आफ्‍नो दुष्‍ट चाल त्‍याग! हे इस्राएलका घराना हो, तिमीहरू किन मर्छौ?’
12 “यसैकारण हे मानिसको छोरो, आफ्‍ना देशवासीहरूलाई भन्‌, ‘कुनै धर्मी मानिसले आज्ञापालन गरेन भने, त्‍यसको धार्मिकताले त्‍यसलाई बचाउन सक्‍दैन। कुनै दुष्‍ट मानिस आफ्‍नो दुष्‍ट चालबाट फर्क्‍यो भने, त्‍यसको दुष्‍ट्याइँले त्‍यसको पतन हुनेछैन। कुनै धर्मी मानिसले पाप गर्छ भने, त्‍यसको पहिलेको धार्मिकताको कारणले त्‍यो बाँच्‍न पाउनेछैन’।
13 यदि मैले त्‍यस धर्मी मानिसलाई ‘तँ निश्‍चय नै बाँच्‍नेछस्‌’ भनी भन्‍दा त्‍यसले आफ्‍नो धार्मिकतामा भर परेर दुष्‍ट्याइँ गर्‍यो भने, त्‍यसको कुनै पनि धार्मिकताका कामको सम्‍झना हुनेछैन। त्‍यसले गरेको दुष्‍ट्याइँको कारण त्‍यो मर्नेछ।
14 यदि मैले दुष्‍ट मानिसलाई ‘तँ निश्‍चय नै मर्नेछस्‌’ भनी भन्‍दा त्‍यसले आफ्‍नो पाप त्‍यागेर न्‍यायसङ्गत र ठीक काम गर्‍यो भने–
15 यदि त्‍यसले कर्जामा राखेको धितो फर्काइदियो, आफूले चोरेर लगेको माल फर्काइदियो, र जीवन दिने विधिहरू मान्‍यो र दुष्‍ट्याइँ गरेन भने, त्‍यो निश्‍चय नै बाँच्‍नेछ, त्‍यो मर्नेछैन।
16 त्‍यसले गरेको कुनै पाप त्‍यसको विरुद्धमा सम्‍झना हुनेछैन। त्‍यसले न्‍यायसङ्गत र ठीक काम गरेको छ। त्‍यो निश्‍चय नै बाँच्‍नेछ।
17 “तापनि तेरा देशवासीहरूले भन्‍छन्‌, ‘परमप्रभुको चाल न्‍यायसङ्गत छैन’। तर वास्‍तवमा त तिनीहरूकै चाल पो न्‍यायसङ्गत छैन।
18 यदि कुनै धर्मी मानिसले आफ्‍नो धार्मिकता त्‍यागेर दुष्‍ट्याइँ गर्‍यो भने, त्‍यसो गर्नाले त्‍यो मर्नेछ।
19 यदि कुनै दुष्‍ट मानिसले आफ्‍नो दुष्‍ट्याइँ त्‍यागेर न्‍यायसङ्गत र ठीक काम गर्‍यो भने, त्‍यसो गर्नाले त्‍यो बाँच्‍नेछ।
20 तापनि हे इस्राएलका घराना, तिमीहरू भन्‍छौ, ‘परमप्रभुको चाल न्‍यायसङ्गत छैन’। तर म तिमीहरू हरेक मानिसको न्‍याय त्‍यसको चालअनुसार गर्दछु।”
21 हाम्रो निर्वासनको बाह्रौँ वर्षको दशौँ महिनाको पाँचौँ दिनमा यरूशलेमबाट भागेर आएको एक जना मानिसले मकहाँ आएर भन्‍यो, “सहरको पतन भयो।”
22 अब त्‍यो मानिस आएको अघिल्‍लो साँझ परमप्रभुको हात ममाथि परेको थियो, र बिहान त्‍यो मानिस आइपुग्‍न अघि उहाँले मेरो मुख खोलिदिनुभयो। यसैले मेरो मुख खोलियो, र म त्‍यस उप्रान्‍त चूप बसिनँ।
23 तब परमप्रभुको यो वचन मकहाँ आयो:
24 “हे मानिसको छोरो, इस्राएलका देशमा भएका ती भग्‍नावशेषमा बस्‍ने मानिसहरू भन्‍छन्‌, ‘अब्राहाम त एकै जना मानिस मात्र थिए, तर तिनले यो देश अधिकार गरे। तर हामी त धेरै छौं। अवश्‍य हामीलाई यो देश अधिकार गर्न दिइएको हो’।
25 यसकारण तिनीहरूलाई भन्‌, ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: तिमीहरू रगतैसित मासु खान्‍छौ, तिमीहरू आफ्‍ना मूर्तिहरूतिर हेर्छौ, तिमीहरू रगत बगाउँछौ, त के तिमीहरू देश अधिकार गर्छौ र?
26 तिमीहरू आफ्‍ना तरवारमा भरोसा गर्दछौ, तिमीहरू घिनलाग्‍दा काम गर्दछौ, तिमीहरू हरेकले अर्काकी पत्‍नीलाई अशुद्ध पार्दछौ, त के तिमीहरू देश अधिकार गर्छौ र?’
27 “तिनीहरूलाई भन्‌: ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: जस्‍तो म जीवित छु, भग्‍नावशेषमा छोड़िएकाहरू तरवारले ढल्‍नेछन्‌, र खुला मैदानमा हुनेहरूलाई म जङ्गली पशुहरूका आहाराको निम्‍ति दिनेछु। किल्‍लाहरू र गुफाहरूमा हुनेहरू रूढ़ीले मर्नेछन्‌।
28 म देशलाई निर्जन र उजाड़ तुल्‍याउनेछु, र त्‍यसको अहङ्कारी शक्ति खतम हुनेछ। इस्राएलका पहाड़हरू यति उजाड़ हुनेछन्‌, कि कोही पनि त्‍यहाँबाट वारपार गर्नेछैन।
29 जब म तिनीहरूले गरेका तिनीहरूका घिनलाग्‍दा कामहरूको कारणले देशलाई निर्जन र उजाड़ तुल्‍याइदिनेछु, तब तिनीहरूले म नै परमप्रभु हुँ भनी जान्‍नेछन्‌’।
30 “हे मानिसको छोरो, तेरा देशवासीहरू एकसाथ बसेर तेरो विषयमा पर्खालहरू र ढोकाहरूका कुना-कुनामा उभिएर एउटाले अर्कालाई यसो भन्‍छ, ‘आऔं, परमप्रभुबाट आएको सन्‍देश के रहेछ सुनौं’।
31 तिनीहरूले सधैँ गरेजस्‍तै मेरा मानिसहरू तँकहाँ आउँछन्‌ र तेरा कुरा ध्‍यानसित सुन्‍नलाई तेरो अगि बस्‍छन्‌। तर तिनीहरू तीबमोजिम चल्‍दैनन्‌। मुखले त तिनीहरू भक्तिको कुरा गर्छन्‌, तर तिनीहरूका हृदय अधर्मसित कमाउनलाई लोभ गर्छन्‌।
32 तँ त तिनीहरूका निम्‍ति प्रेमको गीत गाउने सुरिलो सोर भएको गायक होस्‌, जो राम्रोसित बाजा बजाउँछ। तैंले भनेका कुरा त तिनीहरूले सुन्‍छन्‌, तर तीबमोजिम गर्दैनन्‌।
33 “जब त्‍यो सबै पूरा हुन आउँछ– त्‍यो निश्‍चय नै हुन आउनेछ– तब तिनीहरूका बीचमा एक जना अगमवक्ता आएको रहेछ भनी तिनीहरूले जान्‍नेछन्‌।”